Dad la yaqaan guurso dad la yaqaan beey dhalaane (Qeybtii 1-Aad) - Caasimada Online
Home Maqaalo Dad la yaqaan guurso dad la yaqaan beey dhalaane (Qeybtii 1-Aad)
Dad la yaqaan guurso dad la yaqaan beey dhalaane (Qeybtii 1-Aad)
Sidiisaba Bini’aadamka deegaanka uu ku noolyahay saameyn ayuu ku yeeshaa (Al-Insaanu Ibnu Bii’atihi), wuu la qabsadaa, waxbadan ayuuna ka qaataa, kuwaasoo hadaanu ku dhexnoolaan laheyn wax laxun oo uu ka dido kana cararo la ahaan lahaa. Nasiib darro! Kadib markii Dalkeenii Hooyo uu burburey, ee Maatadeenii iyo Marasteeniiba Dibado iyo dhul Gaalo u hayaameen, Oowlaadii eey ku dhaleena ku qaangaartey, ayaa ceebaal badan oo inoo qarsoonaa bannaanka inooga soo baxeen. Waxyaabo markii hore ummadeenu aan ka dhex dhici jirin ama aad u yareyd dhicitaankooda ayaa kordhey, haba ugu darnaatee guursiga Ajaanibta nuucyadiisa kala duwan’e. Aan sii Afeefto’e dumarkeena qurbaha joogaahi intooda babadan Ajaanibta ma guursadaan, waxaase jira qaar aad u yar oo guursada Ajaanibta, kuwaasoo aan matalin dumarkeena qiimaha badan ee Soomaaliyeed. Sababaha khubaradu eey arinkan hadda u aaneeynayaan, ayaa waxaa ka mid ah 1-In qeyb badan oo ragii Soomaaliyeed ka mid ah eey mas’uuliyadoodii gabeen markii qrubaha la yimid, oo dumar badan inta Ilmo kadhaleen, ku silciyeen, ugu dambeyna ka tageen, sidaana Single-Mothers uga dhigeen. Dumarkii jabkaa gaareey, oo eey usii dheer tahay in Ragga Soomaalidu leeyihiin waa Garoob ilmo nin kale ku raran, sidaana qaar ka mid ah dumarkaa Ajaanibta naf ka raadiyeen, iyagoo ciil dartiina dacaayado kala duwan ka faafiya guud ahaan Ragii Soomaaliyeed oo dhan, waxkastana ku wada amaanaya wixiiba Rag Ajaanib ah, sidaana suuqa ku buufiyey gaar ahaan dhagaha gabdhihii yaryaraa ee Guur-Doonka ahaa ee Soomaaliyeed qurbahana joogey, kuwaasoo nasiib darro! Dhul Gaalo kusoo korey, yaraantoodii lasoo cayaari jirey Ajaanib, wax lasoo cuney, wax lasoo bartey, isku luqadna wada qaateen. 2-Tan kale ayaa waxeey tahay in dumarkaa Ajaanibta guursada intoodabadan yihiin kuwo Aabayaashood eey dhinteen, oo Hooyo Single-Mother-nimo eey kusoo korisey, oo Qiimaha iyo Naxariista nin Soomaaliyeed uu leeyhay aaney garaneyn, hadii xumaantiisa aanba laga dharjin. 3-Qaar waa kuwo Hooyadood iyo Aabahooddba eey qurbaha uga wada dhinteen, oo College-yada Gaalada eey kusoo korsadeen, oo waxa eey arki jirteen ee waxba u ahaa, ama naxariisba dareensiinjirey Gaalada uun ahaayeen, taasoo keeneeysa in Ajaanibta eey soo jiitaan, 4-Nasiibdarro! Qaar waa kuwo yaraantoodii eey faraxumeeyeen oo sidaa ugu galeyba. 5- Gabdhahaa intooda badan waa kuwo horey usoo tumanjirey oo waqti xeero iyo fandhaal kala dheceen soo baraarugey, oo is leh ama da’dan nin Soomaali ah kuguma rabo, iyo/ama Gabarnimo la’aantaada, ama Caan ayaadba xumaan ku aheyd, oo waa la isku kaa sheegey ee Ajnabi ku dhagso, lagana yaabe in eey kasoo laabatey wixii hore, ileyn Towbada Allaah markasta weey furantahaye. 6- Nasiibdarro! Dumarka da’da yar qaar waxeey si aan ka fiirsi laheyn oo indho la’aan ah isaga qaateen Propaganda meelaha dumarka xun xun eey galiyeen oo ah in Raga Soomaaliyeed aaneyba Romantic aheyn, lagana yaabe in waligeedba aaney la dhaqmin nin Soomaaliyeed, 7- Qaar waxeeyba leeyihiin Balwad Sigaar iyo Qamri, iyo dhaqan reer Galbeed oo nin Soomaali ahba isma keeneeysaan ayeyba is leedahay waa sida badanaa dhacda’e. 8-Ugu dambeyn waxaa dhacda in Self-Worth-kii iyo Self Esteem-kii ka dhintey, hadaan si kale u iraahdo Qiimo isla lahaashihii uu ka dhintey gabadhaa, dabcan jahlina uu jiro oo Ajnabiguba wax kale la yahay. Qaarbaa faan mooda in la yiraahdo, Heblaayo Nin Ajnabi ah baa qaba ama eey guursatey!